Inta badan xildhibaanada BFS oo usoo jabay dhanka hal musharax iyo rajada musharaxaas oo aad u sareyso. Hadaba waa kuma musharaxaas?
arlaadi February 7, 2017 No Comments
Ayada oo ay wax ka yar 12 saac ka dhimantahay doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee 4ta sano ee soo socotay ayaa ay cawada Baidoa Media Centre sameysay u kuurgalid ay ku ogaanayso qaabka ay wax uga socdaan magaalada Muqdisho iyo sida ay u kala taageero badanyihiin musharaxiinta u taagan qabashada xafiiska ugu sareeya dalka.
Baidoa Media Centre oo xiriir la sameysay xildhibaano kala duwan ayaa waxa ay soo ogaatay in xiliga la joogo uu musharax Shariif Sheekh Axmed yahay murashada ugu taageerada badan marka laga hadlayo kala horeynta musharaxiinta.
Xildhibaanada isbedel doonka badankood iyo weliba kuwii hore ayaa cawada taageeradooda iskugu geeyay musaharax Shariif Sheekh Axmed ayada oo wararka qaarna ayba sheegayaan inuu hogaanka sare ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya taageeray Shariif Sheekh Axmed.
Dhanka kale waxaa sare u kacday sidoo kale taageerada uu helayo musharaxa shacabka Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasoo ay xildhibaanada dhalinyarada ahi ee ku cusub siyaasada doonayaan inay garab istaagaan musharax Farmaajo oo haysto kalsoonida shacabka Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibada dalka ku sugan.
Madaxweynaya uu xiligiisu dhamaaday Xasan Sheekh Maxamuud ayaa weli haysto isna taageerada xildhibaano aan la dhayalsan karin tiradooda isaga oo rajo ka qabo in dib loo doorto.
Saadaasha ayaa ah in sadexdaan musharax ay usoo gudbi doonaan wareega labaad ee doorashada ayada oo la filayo inay wareega ugu dambeeyana iskugusoo baxaan Shariif Sheekh Axmed, Xasan Sheekh Maxamuud ama Maxamed Cabdullaahi Farmaajo..
Iskusoo wada duube, natiijada doorashadaan ayaa lagu kala bixi doonaa beri oo Arbaco ah haduu Illaah SWT idmo.